Soo koobid Go’aanka gaarka ah ee Garsoore Cabdi-qawi yuusuf. - XAL DOON
Home NEWS Soo koobid Go’aanka gaarka ah ee Garsoore Cabdi-qawi yuusuf.
Soo koobid Go’aanka gaarka ah ee Garsoore Cabdi-qawi yuusuf.
Garsoore Cabdi qawi Yuusuf Axmad Gudoomiyihii hore ee Maxkmadda cadaaladda adduunka ayaa soo saaray go’aan ugaar ah maadaama ay jireen arimo uu kaga aragti duwanaa Garsoorayaasha kale ee Maxkamadda ICJ.
waxa uu ku raacasanayay Garsoorayaasha diidmada sheegashada Kenya ee ah in iyada iyo Soomaaliya ay lahaan jireen xaduud badeed cabiran, loona raacay cabiridiisa loolka is bar-bar socda .
Waxa uu ku raacsanyahay Maxkamadda diidmada ay diiday dalabka Kenya ee ah in la Maxkamadda ay ku cabirto xadka labada dal cabirka loolka is bar-bar socda taas oo ay Kenya u aragtay in uu yahay xalka qura ee lagu gaari karo cadaalad.
Sidoo kale Garsoore C/qawi waxuu u arkaa Maxkamadda in ay raacday xariiqa toosan ee lagu cabiro badaha marka ay xadeynaysay Biyaha qaranka, aaga dhaqaalaha baraxa-tiran iyo qol-foof-qaaradeedka intaba, taas oo uu ku tilmaamay mid waafaqsan Q.15-aad ee Heshiiska Caalamiga Ah ee UNCLOSE, hanaanka saddexda heer ee ay Maxkamadda u isticmaasho xadaynta iyo tubta toosan ee Maxkamadda ay raacdo.
Habka doorashada tiirarka El-elada ah marka la qaadayo cabirka badda taas oo uu ku sheegay mid aan waafaqsanayn Xeerka badaha iyo fiqhiga qaanuunka.
Sidoo kale Cabdiqawi ayaa sheegay in uu diidanyahay Q. 4 iyo 5-aad ee xukunka , diimadiisana waxa ay ku salaysantahay habka loo fuliyey saddexda heer ee loo cabiro badaha, waxayna u muuqataa in aysan garsoorayaasha ku kala aragti duwanayn mabaad’iaadaha waawayn balse ay tahay arimo farsamo oo dhanka fulinta ah Xeerka ah.
C/qawi waxa uu diiday waxa ay Maxkamadda ugu yeertay hanaanka samaynta Juquraafiga ballaaran, toos oo Maxkamadda ay ku sheegtay faqrooyinka 164,168 ee xukunka, waxuuna ugu yeeray arin ugub ah, Xeebaha Soomaaliya iyo Kenyana aan ku haboonayn, waxa kaliye ee laga fahmayana ay tahay u jeedo dib u habayn Garsoorka uu ku samaynayo Juquraafiga.
Sidoo kale waxa uu sheegay in uu la yaabanyahay fara-galinta Maxkamadda ee khadka aaga dhaqaalaha baraxa tiran iyo Qolfoof-qaaradeedka, waxuuna ku sheegay Maxkamadda cinwaanka ay u samaysay ee ahaa “ Samaysanka juquraafiga iyo saamaynta uu ku leeyahay loolalka kala fog” in ay tahay erey bixino aan horey loo arag.
Sidoo kale C/qawi waxuu sheegay in xukunka Maxkamadda meelaha qaar uu u baahan doono fasiraad, meelo qaarna la tix-galiyey duruufo siyaasadeed, isagoo raaciyey in khariidada tirsigeeda yahay 12 laga yaabo in dhinacyada ka abuurto buuq cusub, taas uu ka waday dhaliil Maxkamadda uu u jeedinayo.